शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ « News of Nepal
शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ
विद्यालय शिक्षाको ‘फलामे ढोका’ भनिने एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अहिले सामाजिक सञ्जाल बधाई र शुभकामनाका शब्दले भरिएका छन् । नतिजा अक्षरांकन पद्धतिमा आउन थालेपछि प्रतिशतका आधारमा सफलता र असफलताको मापन गर्ने प्रवृत्ति हटेको छ । कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यार्थी पनि हतोत्साही र निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । एसईईको नतिजा राम्रो आउँदैमा भविष्य उज्ज्वल भइहाल्ने र कम ग्रेड आउँदैमा भविष्य चौपट भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । एसईईपछि सही विषय छनोटले नै आगामी यात्रालाई सहज गराउँछ ।
अहिले लाखौँ विद्यार्थी एसईईपछिको यात्रा कस्तो बनाउने भन्ने चिन्तनमा छन् । आगामी शैक्षिक गन्तव्यका लागि उपयुक्त शिक्षण संस्था र विषय छनोटमा विद्यार्थीको दौडधुप शुरू भइसकेको छ । विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षित गर्न बजारमा थुप्रै शिक्षण संस्थाले आ–आफ्ना ललिपप बाँड्न लागिपरेका छन् । कक्षा ११ र १२ लाई सरकारले माध्यमिक तह नै बनाए पनि एसईईपछि उच्च शिक्षा अध्ययन र आफ्नो करिअर बनाउने ढोका बनेको छ । यसअघि उच्च माध्यमिक तह माध्यमिक तहभित्रै भए पनि विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन र आफ्नो करिअरका लागि उपयुक्त बाटो बनाउने आधार कक्षा ११ र १२ नै बनेको छ ।
सरकारले शिक्षा जीवनोपयोगी, अनुकूल र परिपूर्ण बनाउन सकिरहेको छैन । अझै पनि कृषि, निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । शिक्षा सर्वसुलभ, व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्ने बहस गरिए पनि आवश्यकीय पूर्वाधार र राज्यले समयानुकूल नीति ल्याउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले ठूलो लगानी गरे पनि बर्सेनि शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । शिक्षामा अर्बौं लगानी हुँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र वैज्ञानिक शिक्षामा किन जोड दिइरहेको छैन ?
हाम्रा अधिकांश कलेज र विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् । अहिले प्राविधिक शिक्षामा आकर्षित हुनेहरु ९ कक्षाबाटै आफ्नो गन्तव्य रोज्न सक्छन् । तर साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरुले स्नातकसम्म अध्ययन गर्दा पनि सामान्य जागिर खाने सामथ्र्य राख्दैनन् । अनि बाध्य भएर सामान्य काममा लागि पनि विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् । यस वर्ष ५६ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएबाटै विदेश जाने विद्यार्थीको स्थिति आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सबै बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ अभियान सञ्चालन गरे पनि अहिले ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । सरकारले भर्ना अभियान चलाउँछ तर विद्यार्थीहरु विद्यालयमा टिक्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले जतिसुकै लगानी गरे पनि विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । एसईईको नतिजाले यस वर्ष पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्कँदो देखाएको छ । संघीय प्रणालीअनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइयो । विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुभन्दा राजनीतिक प्रभाव जमाउने थलो बन्यो । मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास हुनै पर्छ ।
प्राविधिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाले मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ । किनभने, शिक्षालाई श्रममा, श्रमलाई सीपमा, सीपलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । गतवर्ष एसईईमा सहभागी भएका साढे ४ लाख विद्यार्थीमध्ये ८ हजार ९ सय ६ विद्यार्थी मात्रै प्राविधिकतर्फका थिए । स्थानीय तहले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गराउँदै शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुपर्छ । देशभित्रै व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहँुच हुने हो भने बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी विदेशिनुपर्दैन । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततासँगै रोजगारको अवसर प्रदान गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
– रुपा खनाल, हाल: भक्तपुर ।
किन यस्तो काम दुई तिहाइको ?
गल्ती गर्नु मानवीय स्वभाव हो, तर गल्तीबाट पाठ नसिक्नु मूर्खता हो । हरेक गल्तीले केही न केही क्षति पु¥याउँछ । तर शक्तिशाली व्यक्तिबाट हुने गल्तीको परिणाम भयावह हुन्छ ।
सामान्यतः मुलुकको सर्वशक्तिमान पदमा रहेको व्यक्तिलाई गल्ती गर्ने छुट हुन्न । हाम्रो मुलुकको सर्वशक्तिमान पद भनेको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भयो भने मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको अवधि मूल्यांकन गर्ने हो भने मुलुकले राजनीतिक संकट बेहोर्नुको मुख्य कारण नै प्रधानमन्त्रीहरूद्वारा भएका गल्ती हुन् । आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्ने काम केही प्रधानमन्त्रीहरूले गरे । केही प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकलाई दूरगामी असर पुग्ने काम गरे । केही प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार संस्थागत गरे । प्रायजसो नौ महिना र १८ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने सिलसिलाबाट मुलुक गुज्रियो ।
प्रतिनिधिसभामा कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै थियो । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखियो । जसका कारण एउटै पार्टीले बहुमत सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर बन्यो । जसका बाबजुद एमाले–माओवादी गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । जनताले वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत दिनुको मुख्य कारण स्थायी सरकार बनोस् भन्ने चाहना नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको तागत भनेको प्रतिनिधिसभाभित्रको गणित हो । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको गणितलाई हेर्ने हो भने ओली जतिको तागतदार प्रधानमन्त्री यो मुलुकमा अहिलेसम्म कोही बनेको छैन । तर ओलीले यो तागतको सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । निरन्तर एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेका छन् । पदीय दम्भ दिन–प्रतिदिन बढेर गएको छ । कानुन मात्रै होइन, संविधानसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने सामथ्र्य यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको छ । राज्यले ऐन कानुन संशोधन तथा तर्जुमा गर्ने भनेको असल काम वा असल उद्देश्यका लागि हो । तर यति बेला राज्यले खराब उद्देश्यका लागि कानुनहरू संशोधन तथा तर्जुमा गर्न खोजेको देखिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयककै कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत प्रस्ट देखियो । मेडिकल माफिया पोस्ने नियतले ल्याइएको यो विधेयक सच्याउन डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । एक महिनाअघि गुठी विधेयकविरुद्ध पनि जनताले यसरी नै आन्दोलन गरे । भू–माफिया पोस्ने नियतले गुठी विधेयक ल्याइएको रहस्य खुल्यो । चाहे मिडिया काउन्सिल विधेयक होस्, चाहे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक होस्, चाहे विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक होस्, सरकारको बदनियत प्रस्ट देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको अस्त्र मुलुक निर्माणका लागि प्रयोग गरेका छैनन् । उनले यो अस्त्र लगातार जनताविरुद्ध र निश्चित माफियाका पक्षमा दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका यी गलत कामलाई सच्याउन आन्दोलन गरिरहन जनता बाध्य छन् । कति आन्दोलन गरिरहने ? जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । ओलीको अलोकप्रियतासँगै संसदीय लोकतन्त्र पनि अलोकप्रिय हुँदै जाने त होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।
गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने, बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्ने, नबोल्नुपर्ने कुरा बोल्ने चरित्रका कारण आफ्नो लोकप्रियता घटेको हो भन्ने आत्मबोध प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रोकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । सरसर्ती हेर्दा नगर्ने काम ओलीले गरिरहेका छन्, नबोल्ने कुरा ओलीले बोलिरहेका छन् । उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट छुद्र भाषा, अपशब्द, रुखो बचनको अपेक्षा जनताले गरेका हुँदैनन् ।
– सरोज सिटौला, दुबई एकता समाज, हाल: आबुधाबी ।
आवाज उठाउँदा हत्या खेप्नुपर्ने ?
भ्रमको भुमरीमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण मिलाऊ
सवारी चलाउँदा विचार पुर्याउनुस् न है
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा ल्होसारको शुभकामना
सरकारी कर्मचारीलाई नोकरी सँगै कानून व्यवसायी..
प्याकुरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत
उपराष्ट्रपति पुन क्रुजमा सरर, ‘राम्रो छ,..
कोरोना भाइरस उपचारका लागि १० दिनभित्र नयाँ अस्पताल निर्माण गर्दै चीन
श्रीमती हुँदाहुँदै बालविवाह गर्न लागेका कलवार पक्राउ
उपराष्ट्रपति पुन क्रुजमा सरर, 'राम्रो छ, अन्य कुरा पछि भनौँला' : पुन
श्रीमानबाट कुटिएकी पूजाको अवस्था दयनीय, उपचारका लागि रकम अभाव
सरकारी कर्मचारीलाई नोकरी सँगै कानून व्यवसायी बन्न धक्का
डोल्पामा कर्णाली जनताआवास कार्यक्रममार्फत ४ सय ५० दलित परिवारका घर बन्ने